Tilmaamaha Isku-dhafka: Tilmaamaha iyo tabaha ku saabsan isku-darka - Ikkaro
Isku-duwidda waxyaabaha la xiriira isku-darka iyo isku-darka nafaqeynta.
Qeybtaan waxaad ku arki doontaa:
Warbixin ku saabsan compost iyo sida loo beero.
Composters, guri iyo ganacsi
Qalab iyo qalab loo isticmaalo isku-darka.
Samaynta aalado isku-darka guriga lagu sameeyo
Khiyaamo iyo waaya-aragnimo dhab ah, oo sharraxaya sida aan u sameeyo nafaqadayda
Sida loo isticmaalo compost-ka aan helno
Waa maxay bacriminta? Waa kala daadsanaanta walxaha dabiiciga oo noqda compost.
Sida loo beero
Waxaan u soo noqonayaa mowduuca nafaqeynta ee fiidiyowyada qaar ee aan soo arkay Charles dowding kaas oo salka ku haya falsafada No Dig, No Dig (oo aan kaga hadli doono maqaal kale). Hoos u dhigiddu waxay kaliya u isticmaashaa bacriminta beerteeda. Wax walba ku kaydi. Waxayna ku baraysaa labadiinaba inaad abuurtaan oo aad u isticmaashaan iyo sida dhir ahaan oo aad u daryeesho beertaada.
Cunnooyinka compost Waxaa jira daraasiin, in kastoo dhammaantood ay ku saleysan yihiin mabda 'isku mid ah laakiin mid kastaaba wuxuu ku sameeyaa qaabkiisa.
Waan arkay oo akhriyay waxyaabo badan oo laxiriira waxaana jira dad iskudaya inay dadajiyaan sida ugu macquulsan si howsha loodaaweeyo, kuwa kale oo hilibka kudarsada, xitaa haraaga cunada bisil, laakiin taas ma arki karo Ku darista hilibka waxay umuuqataa qalad noocan oo kale ah burburka hawada aerobic, wax kale ayaa ah inaad ka sameysid wasaqda qashinka adag ee magaalooyinka, sida kuwa lagu soo ururiyey haamaha, laakiin badanaa waxaa lagu sameeyaa hababka anaerobicka waxaana ka hadleynaa wax gebi ahaanba ka duwan.
Sidee loo sameeyaa isku-darka guriga lagu sameeyo oo lagu xardho suumanka
Waxaan bilaabay inaan samee compost oo waxaan sameeyey a isku-darka isku-darka guryaha lagu sameeyo ee fudud. Waxaan u daynayaa xoogaa sawirro ah iyo xoogaa sharaxaad yar si aad u aragto sidaan u sameeyay dhamaadka qormada waxaad ku arki doontaa moodel kale oo lagu sameeyay baaldiyo, ayagoo ku dayanaya qashinka.
Waxaan isticmaalaa santuuqyadii hore ee aan dib uga isticmaali jiray dadka ama shirkadaha doonaya inay tuuraan.
Cabirka aan isticmaalay waa Euro pallets, marka waad ogtahay dhererka 1,20 × 0,8 m sidaa darteed qashinka compost wuxuu yeelan doonaa saldhig 1m x 0,8m sare ah.
Sidee loo sameeyaa isku-darka guriga lagu sameeyo oo leh durbaan
Waxaan maskaxda ku hayey fikradda ah samee isku-darka guriga lagu sameeyo si aad uga faa'iideysato qashinka khudradda ee jikada.
Waxaan rabaa inaan waxbadan ka baaro aerobic, anaerobic iyo vermicomposters. Marka waxaan kaaga tagi doonaa macluumaadka, noocyada kala duwan ee kuwa iga soo horjeeda ee aan helo iyo tijaabooyinka qaarkood ee aan sameeyo.
Godadka durbaanku waa sidaa si fiican hawo u leh iyo waxyaalaha dabiiciga ah oo si fiican u dhalan kara, xitaa marka waxaan u arkaa faa'iido darrooyin dhowr ah noocan oo kale ah.